Sibe nephathi elifudumele lokuzalwa ebusika obubandayo, ukugubha ndawonye nokubamba i-BBQ yangaphandle. Intombazane yosuku lokuzalwa nayo ithole imvilophu ebomvu evela enkampanini.
Umbukiso We-Inthanethi Welebula & Ukupakisha -Mexico naseVietnam
Ngo-Dis, ilebula le-Shawei labamba imibukiso emibili ku-inthanethi yokupakisha eMexico ne-Vietnam Labeling.Lapha sibonisa ikakhulu izinto zethu ezimibalabala zokupakisha kanye nezitikha zephepha lobuciko kumakhasimende ethu, futhi sethula isitayela sokuphrinta nokupakisha, kanye nomsebenzi. Umbukiso oku-inthanethi usivumela ukuxhumana ...
I-Black Back Outdoor PVC Banner
Izindwangu zokufafaza ziyahlukahluka ekusebenzeni nasekusebenziseni. Kungabonakala ngokuqina, ukukhanya nezinto zokwakha, njll. Isingeniso Somkhiqizo Indwangu emnyama nemhlophe ibizwa nangokuthi indwangu yangemuva yokukhanya kwebhokisi elimnyama noma indwangu emnyama.Ishisa izingqimba ezimbili ezingaphezulu nezingezansi zefilimu ebunjiwe ye-PVC, ...
HUAWEI - Ukuqeqeshwa kwekhono lokuthengisa
Ukuze kwenziwe ngcono ikhono labathengisi, inkampani yethu isanda kuya esifundweni se-HUAWEI. Umqondo wokuthengisa osezingeni eliphakeme, ukuphathwa kwethimba lesayensi kuthi namanye amaqembu amahle kakhulu sifunde okuningi. Ngalolu qeqesho, iqembu lethu lizoba lihle kakhulu, sizokhonza e ...
I-DIY Heat Transfer Self Adhesive Vinyl
Izici zomkhiqizo: 1) IVinyl Yesigcilikisha yokusika ubumba bobabili obucwebezelayo nobomdaka. 2) ingcina ye-solvent ebucayi ingcina ehlala njalo. 3) I-PE-Camera Silicon Wood-Pulp Paper. 4) ifilimu lekhalenda le-PVC. 5) Ukuqina konyaka ongu-1. 6) Strong eqine futhi sezulu ukumelana. 7) imibala engu-35 + ukukhetha i-8) Transluce ...
I-Outdoor BBQ Party
Shawei digital Hlela imisebenzi yangaphandle njalo ukuklomelisa iqembu ngenhloso entsha encane.Leli iqembu elincane futhi elinomfutho, abantu abasha bahlala bewuthanda umsebenzi wokudala nemisebenzi.
Ukuze ukhonze kangcono amakhasimende, uqonde izidingo zawo, i-SHAWEI DIGITAL ihlale ibamba ukuqeqeshwa kobuchwepheshe kuthimba lokuthengisa, ikakhulukazi ilebula izinto ezintsha nokuqeqeshwa komshini wokuphrinta. Ngaphandle kwamakilasi aku-inthanethi avela ku-HP Indigo, Avery Dennison naseDomino, SW LABEL nawo ahlela ukuvakashela i-printin ...
Ilebheli le-SW lisethe izinsuku ezimbili ngaphandle ukunweba nokuphatha lonke iqembu e-Hangzhou, ukwenza isibindi nokusebenzisana. Ngesikhathi sokwenza lo mkhuba, wonke amalungu abesebenza ngokubambisana. Futhi Lokho kuyisiko lenkampani — Singumndeni omkhulu eShawei Team!
I-PE Banner NON PVC
Izinto Zokuphrinta Okuhlaza – 5M ububanzi PE Banner NON PVC 5M ububanzi, ingaphrintwa yi-Eco-solvent, Solvent, UV, HP Latex Grams ingaba yi-100g, 110g, 120g, 140g, 160g, 170g NON PVC, ivuseleleke, ingenamthungo
Uyini umehluko phakathi kwezinkampani ezakha imikhiqizo nama-ejensi wokukhangisa?
Ukuphrinta kwe-UV kuyindlela yokuphrinta kwedijithali esebenzisa amalambu e-ultra-violet ukomisa noma ukwelapha uyinki njengoba kuprintiwe. Njengoba iphrinta isabalalisa inki ebusweni bento (ebizwa nge "substrate"), amalambu e-UV aklanywe ngokukhethekile alandela ngemuva, elapha - noma omisa - uyinki ...
Kuyini Ukuphrinta kwe-UV?
Ukubaluleka kokuphrinta kwekhwalithi ebhizinisini
Ukuphrinta sekufinyeleleke kakhulu emphakathini jikelele eminyakeni yamuva nje, ukuphrinta kungenzeka ngqo ngqo kusuka kwamanye ama-smartphones anamuhla. Ngenkathi ukuphrinta kwasekhaya kungakwanela ukusetshenziswa komuntu siqu, kungumdlalo webhola ohlukile wabantu abasebenzisa izinsizakalo zokuphrinta ukumaketha ibhizinisi labo. Ibhasi ...